Networking ရဲ့ နောက်ဆုံးနည်းပညာတွေကို ဘယ်လိုလိ&#4143 — MYSTERY ZILLION
Networking ရဲ့ နောက်ဆုံးနည်းပညာတွေကို ဘယ်လိုလိ&#4143
လုပ်ပါအုံး လိုက်လေေ၀းလေ ဖြစ်နေပြီး.. ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ.. စိတ်တွေလဲ ကုန်လာပြိီး .
ကိုယ်သိတဲ့ Knowledge က တဖြည်းဖြည်းနည်းလာသလို ခံစားနေရတယ်..
စိတ်ဓါတ် ကျတယ်ေြပြာရင် ပိုသေချာမလားဘဲ...
ဲတခြားသူငယ်ချင်းတွေရော ဘယ်လိုအားမျိုးနဲ့ လိုက်နေကြတာလဲ... မျှေ၀ကြပါအုံး...
ဘယ်လိုပြောရမလဲ Networking လေ့လာနေတာ ဘယ်လောက်ကြာနေပြီမို့လဲဗျ။ အစပိုင်းမှာတော့ သိစရာတွေ များတယ်လို့ သိသွားတာက အမြတ်ပါလေ။ ဘာတွေ သိဖို့လိုသေးတယ် ဘာတွေမသိသေးဘူး ဆိုတာကို ကိုယ့်ဘာသာ မြင်လာတယ်ဆိုကထည်းက ကိုယ်ဟာ သိနေတဲ့ လမ်းကြောင်းပေါ်ကို ရောက်နေပြီလို့ သဘောပေါက်ထားလိုက်ပါလေ။
ခုမှ သူငယ်တန်းဘဲ ရှိသေးတာ ဆယ်တန်းစာတွေ လှမ်းကြည့်ပြီး စိတ်ပျက်နေလို့ ဘယ်ဖြစ်မလဲ။ ဖြေးဖြေးချင်းတက်သွားမှာပေါ့။ စူးနစ်တဲ့ လေ့လာအားနဲ့ မှတ်သားထားနိုင်တဲ့ အားလေးတွေ စိုက်ထားလိုက်ရင် ဖြစ်လာမှာပါ။ မှတ်သားနိုင်တဲ့ အားမရှိရင် ဘာလေ့လာလာ ရှေ့ဆက်မတက်နိုင်ဘဲ နောက်ကစာ ပြန်ပြန်ဖတ်နေရတော့ ကိုယ့်ဘာသာ စိတ်ပျက်လာနိုင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့လဲ ဒီအတိုင်းပါဘဲ။ ကိုယ်စိတ်ဝင်စားတဲ့ ဘာသာမှာဘဲ လေ့လာအား ကောင်းပါတယ်။ မှတ်သားနိုင်စွမ်း အားကောင်းပါတယ်။ ဆက်ချီတက် ....
အမှန်တော့ ဒါတွေက ပကာသန တွေပါဗျာ ။ စိတ်မပျက်ပါနဲ့
နောက်တာပါ။ IT မှာကတော့ ဘယ်ဟာမဆိုပါ Get your hands dirty ရွှံ့ထဲနှစ်လို့ပြောတာဟုတ်ဖူးနော်။ hand-on လျှောက်စမ်းဖို့ပြောတာ။ လုပ်မရရင်လဲ မရဘူးပေါ့။ ဘယ်လိုမရလဲသိမယ်။ အခြေခံ ကောင်းဖို့ကနဲနဲကြာတယ်။ ကျနော်လဲ အခြေခံ ကောင်းအောင်လုပ်နေတယ်။ အခြေခံကောင်းရင်တော့ ဘုန်းကြီးဝတ်မယ်ဗျာ။
Right.....But...I thinks I m also at kindergarten in IT.....I also have to learn many many things.....But IT Infrastructure is also important to develop IT in Myanmar....Really worried about IT developing in Myanmar....:18:
ကောင်းပါတယ် MrDBA. လေ့လာတာတော့ နဲနဲကြာနေပြီဆိုပါတော့ဗျာ...
ဒါပေမယ့် ဗျာ.. နည်းပညာတွေက သိတယ်မဟုတ်လား.. အခုဆိုရင်ဗျာ Exchange server နဲ့တွဲသုံးတဲ့ OCS (Office Communication Server) ဆိုပြီးပေါ်တယ်ဗျာ.. Mobile feature အသစ်တွေပါတယ်ဗျာ.. cisco ဆိုလဲ product တွေကအများကြိီး.. စာတွေ့ဘဲရှိတယ်..
လက်တွေ့ကခက်နေတယ်... နိုင်ငံခြားက သူငယ်ချင်းတွေမေးကြည့်တော့လဲ Unix, Novell Netware .. ဘယ်လိုလုပ်မလဲ... တော်တော်လိုက်နေရတယ်.. Network Admin ဖြစ်ချင်ရင် Program ကလည်းတတ်ရသေး... Database လေးကလည်းလိုက်ရသေးတယ်ဗျာ.. အလုပ်ထဲမှာကျတော့လဲ Technical က Technical လို မဆက်ဆံခံရပြန်ဘူး.. ကဲဘယ်လိုလုပ်မှာလဲ... ခိုင်းတော့တာခိုင်းတာ မသိလို့သင်ပေးလိုက်ပြန်တော့လဲ ကိုယ့်ကိုကျေးဇူးမတင်... အော်...အော်.... Technical.... Technical....ကိုယ့်နိုင်ငံမှာလဲ
အနှိမ်ခံရ သူများနိုင်ငံရောက်တော့လဲ အနှိမ်ခံရ... တချိန်ချိန်ကို ဘဲစောင့်မျှော်နေရတယ်...
kemose wrote: »
ဘာဆိုဘာမှမသိသေး မတတ်သေးတဲ့အရွယ်မှာတောင်မှ study လုပ်နိုင်ခဲ့တာ အခုရောဘာလို့မရ ရမှာလဲဆိုတဲ့စိတ်သွင်းပြီးလုပ်ပါ
ကောင်းလိုက်တာဗျာ ကျေးဇူးပါ... တကယ်ပြောတာပါ... \_:d/\_:d/\_:d/
I'm still in the level of Junior Pre Kindergarden.
ဇူးဇူးသိတာတော ့...အခြေခံ...တတ်ထားရင်တော ့...နောက်ဆုံးဘာတွေ ဘယ်လောက်ထွက်ထွက်..လိုက်နိူင်ပါတယ်....အခြေခံမသိပဲ အကြီးကြီးတွေ သွားသိချင်တယ်ဆိုရင်တော ့...တော်တော် တိုင်ပတ််မယ်...ခင်ဗျ...ဟိုဟာ တစ်စ...ဒီဟာ..တစ်စနဲ ့
စော်ကားတာ..မဟုတ်ဘူးနော်....ပြောပြတာပါ...အနော်လို ့ပေါ ့..အဟင် ့..အခြေခံမရှိတော ့...
ဟိုဟာလည်း....နားမလည်..ဒီဟာလည်း....နားမလည်....ပြောရတဲ ့သူတွေက....မောလို ့သေတော ့မယ်...အဲဒါ ကြောင် ့...အခြေခံ လိုပါတယ်..ခင်ဗျ..အဲဒါဆို...လွယ်တယ်...ခဏပဲ
အခြေခံချညး်ပဲလုပ်ရင် အဆင်မြင့်မသိဘာတွေဖြစ်လိမ့်မယ်.... ဥပမာ7layer ကို မွန်ထွန်နေအောင် ကျွမ်းကျင်လဲ နောက်ဆုံး OS နဲ့ ရင်းနှီးမှုရှိအောင်လုပ်ကမယ်........... error ကို အတတ်နိုင်ဆုံး ရှင်းထုတ်တတ်ကမယ်.......... ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်နောက်ဆုံး ကိုယ်လုပ်နိုင်ကမယ်ဆိုပြီးလုပ်ပါလားဗျာ... အချိန်တော့ နည်းနည်းပေးကတယ်
လေ့လာတဲ့သူအများစုဟာ အစပိုင်းမှာ အရမ်းတက်ကြွပြီး နောက်ပိုင်းကျတော့
motivation တွေကျပြိး လျော့တိလျော့ရဲဖြစ်နောက်တော့ ဆက်မလုပ်ဖြစ်တော့ဘူး။
သိပ်မလောဘဲ ဖြည်းဖြည်း မှန်မှန် လုပ်ဖို့ပဲလိုပါတယ်။
တစ်ချို့လေ့လာရတဲ့ အကြောင်းအရာတွေက နားလည်ကျေညက်ဖို့ incubation period လိုတယ်ဗျ။
kotharthar ကျွန်တော်ကတော့ သိပ်မလောပါနဲ့လို့ပဲပြောချင်ပါတယ်။
ကျွန်တော်ပြောချင်တာက နည်းပညာက လိုက်လေမဆုံးလေ.. သူတို့ထွင်တဲ့ဟာကိုဘဲ လိုက်နေရတယ်ဗျာ.. နောက်ဆုံးပေါ်နည်းပညာတွေ လိုက်ဖို့ဆိုတာကလည်း ပိုက်ဆံလိုသေးတယ်လေဗျာ....
နဲနဲ မရှင်းဖူးဗျာ။ နောက်ဆုံးပေါ်နည်းပညာဆိုတာ ကိုkemose ကဘာကိုဆိုလိုလဲမသိဘူး။ ကျနော်တို့ ပြောဖူးသလိုပေါ့။ 'ဝ' ဖြစ်ဖို့က နဲနဲကြာမယ်ထင်တယ်။ 'ဝ' ကနေ 'ဝိ' တို့ 'ဝါ' တို့ဖြစ်ဖို့က မြန်ပါတယ်။ အများစုက စိတ်မရှေကျဘူးဗျ။ kotharthar ပြောတလိုနားလည် ကြေညက်ဖို့လိုပါတယ်။ New Tech ကိုလေ့လာတိုင်း Basic ပြန်ပြန်လှန်နေရရင်မဖြစ်ဖူးပေါ့။
ကို kemose ပြောတဲ့ နည်းပညာနဲ့ ငွေကြေး ဆက်စပ်မှူကို ကျနော်နားမလည်ဘူး။ WiMax ပေါ်တဲ့အချိန် WiMax ကိုလေ့လာဖို့ WiMax ဝယ်သုံးတလိုများဖြစ်နေမလား ( နောက်တာနော် ကြိုပြောထားတာ) :P:P:P
အားလုံးပြောပြတာကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်... စဉ်းစားရင်း အတွေးတွေ ပေါ်လာပါတယ်...
ကို kemose ပြောတဲ့ နည်းပညာနဲ့ ငွေကြေး ဆက်စပ်မှူကို ကျနော်နားမလည်ဘူး။ WiMax ပေါ်တဲ့အချိန် WiMax ကိုလေ့လာဖို့ WiMax ဝယ်သုံးတလိုများဖြစ်နေမလား ( နောက်တာနော် ကြိုပြောထားတာ)
ပိုက်ဆံလိုတယ်ဆိုတာ ဘာဘဲဖြစ်ဖြစ်ဗျာ.. ဒီလိုလေ.. self study လုပ်မယ်ဆိုရင်တောင် စာအုပ်၀ယ်ရမယ်.. Internet သုံးရမယ်.. E book တွေလေ့လာရမယ်..
(အခုကိုယ်က ပိုက်ဆံစုပြီး server 2003 လေ့လာတယ်.. မပြီးသေးဘူး server 2008 ပေါ်တယ်.. )ဥပမာပြောတာပါ. ကိုယ်ကလက်တွေ့စမ်းမယ် ..ဟုတ်ပြီ VPN စမ်းမယ် သူငယ်ချင်းနှစ်ယောက်လိုမယ်. connection နှစ်ခုလိုမယ်.. ဒါမှမဟုတ် ISDN Exchange အသေးလေးလိုမယ်.. wireless စမ်းမယ် wireless point လိုမယ်... ကဲ လက်တွေ့မရှိဘဲ
ဘာလုပ်ရင် ဘယ် error တက်လဲ ဘယ်သူသိနိုင်မှာလ စာတွေ့နဲ့လက်တွေ့ ကွာလားမကွာဘူးလား Porfessional လုပ်တဲ့လူတွေသိပါတယ်... လောလောဆယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာ ပြောတာနော်.... network မှာဆရာဖြစ်နေတယ် အကိုတွေ၊အမတွေ ပိုက်ဆံဘယ်လောက်ကုန်ပြီလဲ???? ကျွန်တော်ပြောတာ အမှားပါရင် ခွင့်လွတ်ပါ.. ဆွေးနွေးနိုင်ပါတယ်.. အပြုသဘောဆောင်ပြီးတော့.....ကျေးဇူးပါ..:d:d:d
ဟုတ်ပါတယ်ဗျာ အကိုပြောတာ သိပ်မှန်တာပေါ့ ဥပမာ Network ကြိုးညှပ်ချင်ရင်တောင် ညှပ်တဲ ့ဟာ၀ယ်ရမယ်။
RJ-45 ခေါ်င်း၀ယ်ရဦးမယ်လေ.... အဲလိုစမ်းချင်ရင်တော ့ကျွန်တော် အကြံတစ်ခုပေးချင်ပါတယ်...
ကိုယ်ကိုယ်တိုင်စမ်းသပ်ရင်တော ့ပိုက်ဆံကုန်မှာတော ့သေချာတယ်ဗျာ....
သင်တန်းတက်ကြည့်ပါလား အကို ပိုက်ဆံကုန်တော ့ကုန်တယ် နည်းများနည်းသွားမလားလို ့..
ကျနော်ကတော့ လေသူရဲတွေရဲ့ဆောင်ပုဒ်လို 'လေ့ကျင့်ရင်းပျံသန်း ပျံသန်းရင်းလေ့ကျင့်' တာပိုကောင်းတယ်လို့ အကြံပေးချင်တယ်။ :67::67: ကျနော် lab တွေလုပ်ပြီး တော်တော်စမ်းဖူးတယ်။ တကယ်ကျ မလုပ်တတ်ဖူးဗျ။
ကျနော်ကိုတော့ အလုပ်ကသင်တာများပါတယ်။ :P:P ဒီလိုပါပဲ 'လေ့ကျင့်ယင်းပျံသန်း ပျံသန်းရင်းလေ့ကျင့်' ပေါ့။ အကုန် Cover ဖြစ်အောင် ကြိုတင်လေ့လာထား ဖို့ကမလွယ်ပါဘူးဗျာ။ လေ့လာနေရင်လဲ Apply လုပ်ဖို့မှီမှာမဟုတ်ဖူး။ New Tech ကထွက်လာမှာပဲ။
Cisco CEO John Chambers တို့ CTO Padmasree Warrior တို့လဲ Cisco product အားလုံး သုံးဖူးမှာ သုံးတတ်မှာ မဟုတ်ပါဘူးဗျာ။ စိတ်ပျက်စရာ မရှိပါဘူး။ ဟုတ်ဖူးလား။ :)
ကျနော်ကတော့ လေသူရဲတွေရဲ့ဆောင်ပုဒ်လို 'လေ့ကျင့်ရင်းပျံသန်း ပျံသန်းရင်းလေ့ကျင့်' တာပိုကောင်းတယ်လို့ အကြံပေးချင်တယ်။
အရမ်းကိုကောင်းပါတယ်ဗျာ.. ကျေးဇူးပါ.. ဟုတ်ပါတယ်..
နားမလည်တာ တစ်ခုမေးမယ်အကို " lab တွေတော်တော် လုပ်ဖူးတယ်. တကယ်ကျမလုပ်တတ်ဖူး.."
ကျွန်တော့် အတွေ့အကြုံ အရဆို ဘာလို့လဲလို့ မေးချင်ပါတယ် အကို... နားလည်ပြီးမလုပ်တတ်တာလား... မမျှော်လင့်တဲ့ အရာတွေကြောင့်လား..
ဥပမာတစ်ခုဗျာ.. ကျွန်တော် လက်တွေ့လုပ်ဖူးတဲ့ AD site replication ဗျာ..
အလုပ်မှာကျတော့ တစ်ခါတစ်လေရတယ််.. တစ်ခါတစ်လေ.. error တက်တယ်.. ဒါမျိုးပြောတာထင်တယ်... ဟုတ်ပါသလား အကို...????????:5::5:
Lab လုပ်ကြည့်ရင် အရမ်း Straight Forward ဖြစ်တယ်ဗျာ။ Environment က အရမ်းရှင်းတယ်လို့ပြောရမယ်ထင်တယ်။ ကျနော်တို့ဘာသာ ဆောက်ထားတဲ့ Enviroment ဗျာ ကျနော်တို့ ကောင်းကောင်းသိတာပေါ့။:65: AD အနေနဲ့ပဲကြည့်ရင် AD ဗျာ လက်တွေ့မှာကျရင် ဒီ AD ကိုယူသုံးတဲ့ တခြား Service တွေ Server တွေ ရှိမယ်။ Environment ကပိုရှုပ်တယ်။ Enviroment ကိုအရင်လေ့လာရပြန်ရော။ Straight forward စဉ်းစားလို့မရတော့ဘူးဗျာ။ ထဲ့တွက်ရတာတွေ များလာတယ်။ အဲတော့ troubleshootingလဲ ပိုများလာတယ်။ စစချင်းကဆို ရေရေလယ်လယ် ချွေးပြန်တာပေါ့။ တခုခုဖြစ်ရင် ဘာဖြစ်တာလဲမေးရင်တောင် ဘာပြောရမလဲ စဉ်းစားရတယ်။ :106::106:တခါနဲ့ တခါ error ကလဲတူတာမဟုတ်ဖူး။ နောက်တော့ troubleshooting က setup ထက် ပညာရတယ်လို့ ယူဆလာတယ်ဗျာ။
ကျနော်ကတော့ Basic ကိုပဲလေ့လာလို့ရမယ် တကယ် Advance ကတော့ အလုပ်ကပဲ သေချာသင်နိုင်တယ်လို့ထင်တယ်။ :67:
နောက်တော့ troubleshooting က setup ထက် ပညာရတယ်လို့ ယူဆလာတယ်ဗျာ။
That right!! systematically ကျတဲ့ network မှာ setup လုပ်ရင်တော့ လွယ်တယ်ဗျာ..
မဟုတ်တော့ အခုကျွန်တော့်လို ဖြစ်ရောဗျာ.. ဘယ်က အစ ရှာရမှန်းကို မသိဘူး.. လုံးလဲချာလဲလိုက်နေတာဘဲ.. ဟီးဟီး :d:d